XOGTA SUUQA: Waa Kuwee 13-Ka Ciyaartoy Ee Ay Inta Ugu Badan Suurtogal Tahay In Lacago Badan lagula Wareegi Doono Suuqa Xagaagan? Imisa Ciyaartoy Ayay Kooxdaadu Ka Doonaysaa Liiskan? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
XOGTA SUUQA: Waa Kuwee 13-Ka Ciyaartoy Ee Ay Inta Ugu Badan Suurtogal Tahay In Lacago Badan lagula Wareegi Doono Suuqa Xagaagan? Imisa Ciyaartoy Ayay Kooxdaadu Ka Doonaysaa Liiskan?
June 11, 2019 at 22:29 XOGTA SUUQA: Waa Kuwee 13-Ka Ciyaartoy Ee Ay Inta Ugu Badan Suurtogal Tahay In Lacago Badan lagula Wareegi Doono Suuqa Xagaagan? Imisa Ciyaartoy Ayay Kooxdaadu Ka Doonaysaa Liiskan?2019-06-11T22:29:57+01:00 CAYAARAHA
Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa haddaba ah mid si wayn ay kooxaha yurub uga dhex muuqdaan waxaana jira saxiixyo muhiim ah oo haddaba lagu dhawaaqay laakiin waxaa la sugyaa in dhawaan ay jiri doonaan heshiisyo waa wayn oo la dhamaystiri doono.
Kooxaha Yurub ugu waa wayn qaar ka mid ah oo xili ciyaareedkii dhamaaday ku soo fashilmay ujeedooyinkii ay lahaayeen ayaa diyaar u ah in ay rekoodhka suuqa kala iibsiga u jabiyaan saxiixyo ay u arkaan in ay xili ciyaareedka cusub wax wayn ku gaadhi karaan.
Kooxaha Real Madrid, Man United iyo PSG ayaa dhamaantood xili ciyaareedkii la soo dhaafay fashil badan la soo kulmay waxayna u muuqdaan kooxaha suuqa lacagta ugu badan galin doona iyada oo Real Madrid haddaba suuqa ku bixisay in ka badan 210 milyan yuro.
Laakiin kooxaha waa wayn ee kale ayaa dhamaantood diyaar u ah in ay sameeyaan saxiixyo ay u arkaan in ay buuxin doonaan gol-daloolooyinkii xili ciyaareedkii la soo dhaafay.
Haddaba shabakada caalamiga ah ee Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa magacyada 13-ka xidig ee inta ugu badan looga hadlayo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee ay suurtogalka tahay in ay xiliyada soo socda la wareegi karaan kooxaha horyaalada yurub ee lala xidhiidhinayo.
Haddaba halkan kaga bogo 13-ka xidig ee ugu hadal haynta badan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee ay suurtogalka tahay in waqtiyada soo socda lala kala wareegi karo.
13-Kalidou Koulibaly- Napoli.
Kooxo badan oo waa wayn oo Yurub ka tirsan ayaa ku dagaalamaya saxiixa difaaca dhexe ee kooxda Napoli kaas oo ay ilaa hadda Man United tahay kooxda ugu dhaw ee suuqa kala iibsiga u jabin karta.
Napoli ayaa Kalidou Koulibaly ku qiimaynaysa 150 milyan yuro wuxuuna difaaca aduunka ugu qaalisan ka badali karaa Van Dijk oo hore Liverpool suuqa difaacyada aduunka ugu jabisay.
Real Madrid ayaa ka mid ah kooxaha doonaya saxiixa Kalidou Koulibaly lakaiin wargayska Daily Mirror ayaa shaaciyay in Man United ay bartilmaameedka kowaad ka dhigteen saxiixa Kalidou Koulibaly.
Kalidou Koulibaly ayaa loo arkaa in uu ka mid noqon doono ciyaartoyda gilgili doona suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xagaaga oo dhawaan furmi doona.
Haddii ay Man United ku guulaysato saxiixa Kalidou Koulibaly waxa uu u gali karaa halkii uu Van Dijk u galay Liverpool ee uu xaaladii kooxdeeda badalay.
kooxaha Manchester United iyo Real Madrid ayaa ah labada kooxood ee loo badinayo in haddii uu Koulibaly uu Napoli ka baxayo uu midkood ku biiri doono.
Tanguy Ndombele ayaa ka mid ah ciyaartoyda loogu doonista badan yahay Yurub ee xagaagan dagaalka wayni ku dhex mari doono kooxaha waa wayn ee Yurub.
Xidiga khadka dhexe ee kooxda Lyon ayaa bandhig wayn soo sameeyay xili ciyaareedkan dhamaadka ah wuxuuna soo jiitay kooxaha Yurub oo ay ka mid yihin Liverpool, Man United, Real Madrid, Tottenham iyo Man City.
Tanguy Ndombele waxa uu haddaba ku jiraa liiska ciyaartoyda ay kooxaha waa wayn ee Yurub doonayaan waxanaa la filayaa in uu ka mid noqon doono xidigaha xagaaga lacagaha badan lagu dul furi doono.
Shaki la’aan Adrien Rabiot waxa uu ku biiri doonaa mid ka mid ah kooxaha Yurub ugu waa wayn kadib markii uu xili ciyaareedkan dhamaadka ah ku soo qaatay qaab xabsi ah oo uu PSG dhibaato wayn ugula soo kulmay.
Adrien Rabiot waxa uu dhawaan noqon doonaa ciyaartoy xor ah oo ku biiri kara kooxda uu doonayo waxaana jira kooxo aad u badan oo doonaya in ay bilaashnimadiisa ka faa’iidaystaan.
Barcelona, Real Madrid, Man United, Liverpool, Juventus iyo waliba kooxo kale oo Yurub ah ayaa doonaya in ay si xor ah kula soo wareegaan Adrien Rabiot.
PSG ayaa luminaysa mid ka mid ah ciyaartoydii ugu tayada fiicnaa khadka dhexe ee kooxdeeda kadib markii ay xili hore oo sanadkii la soo dhaafhay ee 2018 ahayd uu khilaaf wayni soo kala dhex galay.
Laakiin kooxda ku guuulaysata saxiixa Adrien Rabiot ayaan bixin doonin wax lacag ah waxayna haddaba kooxaha Yurub u kala dheeraynayaan sababihii ay xidiga reer France ku soo jiidan lahaayeen.
Adrien Rabiot waxa uu albaabka PSG ka bixi doonaa maalinta la gaadho June 30, waana waqti aad u kooban muddada uga hadhsan inuu ka baxsado ciqaabtii uu bilaha badan ku soo jiray wuxuuna u dhaqaaqi doonaa kooxda uu dantiisa ugu badan ka dhex arko.
Kooxaha Yurub ugu waa wayn ayaa safdheer ugu jira saxiixa da’yarka layaabka soo sameeyay ee Joao Felix oo ka tirsan kooxda Benfica.
Heshiiska Joao Felix ayaa lagu burburin karaa 120 milyan yuro waana lacag ay doonayso kooxda Benfica in ay hesho 19 sano jirkan reer Portugal ama ay kooxdeeda xili ciyaareed kale ku sii hayso si uu qiimihiisu sare ugu sii kici karo.
Kooxaha Real Madrid, Man United, Liverpool iyo Manchester City ayaa dhamaan magacyadooda lagu xusay kooxaha doonaya saxiixa Joao Felix’.
Ole Gunnar Solskjaer oo doonaya in uu Man United ka saaro xaalada murugada badan ee ay ku jirto ayaa isha ku haya saxiixa Joao Felix’ kaas oo loo arko in uu hayo dariiqii Cristiano Ronaldo.
Waxaa la filayaa in 19 sano jirkan Joao Felix uu ka mid noqon doono ciyaartoyda suuqa xagaagan saamaynta badan yeelan doona ee lacagaha waalida ah lagu kharash garayn doono.
Manchester City ayaa la sheegay in ay Felix u soo bandhigtay heshiis shan sanadood ah oo uu 26 milyan gini ku qaadan doono laakiin madax waynaha Benfica ayaa shuruud ku xidhay kooxda la wareegaysa da’yarkan wuxuuna doonayaa in la bixiyo 120 milyan isla markaana uu hal xili ciyaareed amaah ku sii haysto.
9-Jadon Sancho- Borussia Dortmund
Da’yarka xulka England ee Jadon Sancho ayaa horumar layaableh ku sameeyay xili ciyaareedkan oo uu ka tirsanaa kooxda Borussia Dortmund kadib markii uu boos ka waayay Man City oo uu Etihad Stadium si sahlan kaga baxay.
Jadon Sancho ayaa ka mid noqday ciyaartoyda ugu hadal haynta badan suuqa kala iibsiga ee xili ciyaareedkan lala soo xidhiidhinayay kooxaha Yurub ugu waa wayn.
Inkasta oo ay wali Manchester City heli karto fursad ay ku soo ceshan karto Jadon Sancho, haddana 19 sano jirkan ayaan doonayn in uu ku soo laabto Etihad Stadium halkaas oo uu fursad ka waayay kooxda Guardiola.
Laakiin Manchester United ayaa waqtiyo badan la sheegayay in ay baankeeda u jabinayso sidii ay Old Trafford u keeni lahayd Jadon Sancho.
Kooxda Borussia Dortmund ayaa wali ku adkaysanaysa in Jadon Sancho aanu iib ahayn laakiin Real Madrid ayaa sidoo kale ka mid ah kooxaha isha ku haya horumarka uu samaynayo Jadon Sancho.
Laakiin koox kasta oo doonaysa in ay la wareegto Jadon Sancho waxay ku qasbanaan doontaa in ay lacag 100 milyan yuro ah dul dhigto adeega 19 sano jirkan horumarka wayn sameeyay.
Riix, 2,3,4,5,6 Si Aad Xogta oo dhan u Akhristo.
« Duqa Muqdisho oo furay Xarunta Waaxda Barwaaqo ee degmada Warta-Nabadda+Sawirro
Police Commissioner’s Death created tension in Beled Weyn »